Ithuba elingandile lokungena kuMabhokobhoko | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/Ithuba elingandile lokungena kuMabhokobhoko
KUZOBA ngenzima iCurrie Cup kulo nyaka njengoba kungunyaka weNdebe yoMhlaba yebhola lombhoxo ezodlalelwa eJapan ngoMandulo. Abadlali bazobe befuna ukuzibonakalisa ukuze bakwazi ukuzibekela indawo eqenjini likaRassie Erasmus. Lokhu kuza emveni kokungadlali kahle kwamaqembu akuleli kwiSuper Rugby, imidlalo yeCurrie cup inikeza abadlali ithuba lokugcina lokuzibonakalisa kumqeqeshi ngaphambi kokumenyezelwa kweqembu elizoyodlala kwiNdebe yoMhlaba.
Ayisikhombisa amaqembu azodlala kulo mqhudelwano, ozoba nomlenze owodwa okusho ukuthi iqembu ngalinye lidlala imidlalo eyisithupha ngaphambi kokuba amaqembu amane azoqeda phezulu adlulele esigabeni esilandelayo sama-semifinals. ICell C Sharks evikela le ndebe izobe iqeqeshwa uSean Everitt ongena ezicathulweni zikaRobert du Preez.
ISharks izothembela kuJon-Paul Pietersen osanda kusayina kuleli qembu evela phesheya kwezilwandle lapho ebedlalela khona iToulon yaseFrance, nozokwazi ukusiza abadlali abasebancane. ISharks izoqala lo mqhudelwano ngaphandle kukaTendai Mtawarira, uLukhanyo Am, u-Akker van der Merve no André Esterhuizen abaseqenjini lesizwe Amabhokobhoko.IWestern Province izothembela kuSiya Kolisi nakuCarlu Sadie obebolekiswe kwiLions ukuba basize leli qembu likwazi ukuyinqoba iCrurrie Cup emveni kokuphuma endaweni yesibili nyakenye.
IVodacom Blue Bulls izodlala lo mqhudelwano ngaphandle kwabadlali abaningi abaseqenjini laMabhokobhoko elizodlala iRugby Championship eqala zingama-20 kuNtulikazi, uDuane Vermeulen, uSchalk Brits noHandré Pollard baseqenjini lamaBhokobhoko, uHendré Stassen osayine neStade Français yaseFrance, uHanro Liebenberg usayine neLeicester Tigers yase-England no-Eli Snyman osayine kuTreviso, yase-Italy.
Lokhu kwenza leli qembu lithembele kubafana abasebancane uManie Libbok, u-Embrose Papier, u-Ivan van Zyl no-André Warner. IXerox Golden Lions inenkinga efanayo neyeBulls yokungabi nabadlali abadala abaseqenjini iSpringbok. Lokhu kufaka uNic Groom, uLionel Mapoe, uRuan Combrinck, uHarold Vorster, uFranco Naude noSylvian Mahuza. Okwenza nalo leli qembu lithembele kubadlali abasebancane abafaka uHacjivah Dayimani oneminyaka engama-21 noTyron Green.
IToyota Freestate Cheetahs engenzanga kahle nyakenye neyaze yadlala umdlalo wama-playoffs neSouth Western District Eagles (SWD) izimisele ukwenza kahle kwazise bakhona bonke abadlali ngaphandle kukaSean Venter noRudy Paige asebeyodlala phesheya kwezilwandle.
IPhakisa Pumas eyahluleka ngemidlalo yokugcina ukuba ikwazi ukudlulela esigabeni esilandelayo nyakenye, abadlali ethembele kubo nguRuwellyn Isbell, uChris Smith noRyan Nell ukuba bayisize ikwazi ukudlulela esigabeni sama-semifinals. Ompetha beProvincial Rugby Challenge iTafel Lager Griquas izofuna ukuqhubeka nokwenza kahle. Ukuze ikwazi ukwenza lokho kuzofanele uVictor Sekekete, uEnver Brandt noKhwezi Mona benze kahle.
Umdlalo wokuvula namhlanje:
ICell C Sharks neTafel Lager Griquas eJonsson Kings Park Stadium ngehora le-19:15.